FOIBE FITSARANA FIARAKODIA : Fiara miisa 498 nahitana tsy fahatomombanana, 80 nampidirina “fourrière”
Nanatanteraka hetsika fitsirihana an-dalambe nanomboka ny 03 febroary 2020 teo ny Foibe fitsarana fiarakodia. 11 février 2020
Hetsika tontosaina eto Antananarivo sy ny manodidina mandritra ny andro vitsivitsy ampian’ireo Zandary avy ao amin’ny Foibe fibaikoana ny Zandarimariam-pirenena.
Izany dia ho fametrahana ny tany tan-dalàna mba hiarovana ny vahoaka sy ny fananany amin’ny lozam-pifamoivoizana mety hateraky ny tsy fahatomombanana ara-teknika.
Tafiditra ihany koa amin’ny fiarovana ny tontolo iainana noho ireo fiara mamoaka setroka tafahoatra sy fanenjehana ireo fiara izay efa tena ratsy sy simba lava, ka mitarika fitohanan’ny fifamoivoizana. Ho hentitra ny fisavana amin’ny tsy fanarahan-dalàna toy ny tsy fanaovana fitsirihana ara- teknika mihitsy sy ireo efa lany fetr’andro indrindra fa ireo fiara nahitana tsy fahatomombanana na “Inapte” nefa mbola miasa sy mifamezivezy. Fantatra araka izany fa nahatratra 1417 ny fiara nosavaina tao anatin’ny efatra andro tamin’ ny herinandro lasa teo iny.
Fiara miisa 498 tamin’ireo no nahitana tsy fahatomombanana ka “Inaptes” ary 80 no nampidirina “fourrière”. Fiara 01 kosa no ahiahiana ho nampiasa hosoka ka nanokafana fanadihadiana. Nisy fiara 01 hafa ihany koa tsy navela hihetsika tao amin’ny Foibe fitsarana fiarakodia noho ny tsy fananany taratasy mihitsy sy ny faharatsiany izay mbola nanokafana fanadihadiana ihany koa. Nisy koa ireo fiaram- panjakana miisa 02 izay tsy nahitana taratasy mihitsy ary koa tsy mbola nanatanteraka fitsirihana ara-teknika, ka nandraisana fepetra avy hatrany toy ny fiaran’olon-tsotra.
Betsaka ny tsy fahatomombanana ara-teknika hita nandritra ny hetsika natao toy ny faharatsian’ny fiara ao anatiny sy ivelany, ny fiara mamoaka setroka tafahoatra, ny fiarakaretsaka izay mampiasa solika alefa mivantana amin’ny bidao na tavoahangy ( reservoir directe), ny tsy fananana taratasy na tsy fanatanterahana fitsirihana ara-teknika mihitsy ary koa ny fampiasana hosoka.
Voaporofo nandritra izao hetsika izao fa ireo fiara tena ratsy mifamezivezy mitatitra entana, biriky, fasika, simenitra eto an-drenivohitra dia tsy manana « visite technique » na taratasy ny ankamaroany. Tsy ekena ny fanelanelanana (intervention) mba hisian’ny fifamoivoizana ieren-doza. Koa manentana ireo olona tsara sitra-po amin’ny fanomezana angom-baovao amin’ny alalan’ny pejy Facebook : “DGSR Mada” na amin’ny laharana : 034 77 777 03 / 034 14 010 05 / 034 05 530 19/ 034 13 975 56 ny mahakasika ireo fiara ratsy na ahiana hitera-doza .